खेतबारी चाहिदैंन, भित्तामा खेती गर्ने प्रविधिको विकास (फोटोफिचर) | कुवेतको पहिलो नेपाली अनलाईन पत्रिका
← साँचो हराएको एउटा दराजः जुन ८२ वर्षदेखि बन्द छ !
दशैंमा नेपाल फर्किंदै हुनुहुन्छ ? भन्सार लाग्ने र नलाग्ने सामान’bout जान्नुस् →
काठमाडौं, असोज ६ । विज्ञानले यस्ता चमत्कार गरिसकेको छ जसको कुनैबेला कल्पनासमेत गर्न सकिदैंनथ्यो ।खेतबारीमा विभिन्न बाली लगाउनु स्वाभाविक हो । यतिमात्र होइन, बढ्दो शहरी जीवनशैलीमा घरको छत तथा कौसीमा तरकारीलगायतका खेती गरिनु पनि स्वाभाविक हो । तर भित्तामा पनि खेती गरिन्छ भन्ने कुरा धेरैलाई अपत्यारिलो लाग्न सक्छ । विज्ञानले यस्तै अपत्यारिलो कुरालाई चमत्कारका रुपमा सार्थक तुल्याउँदै आएको छ ।
बढ्दो शहरीकरणका लागि खेतीका लागि जमिनको अभाव बढ्नु र जनसंख्या वृद्धिदर पनि लगातार बढ्दैजानु जस्ता कारणले खाद्य संकट निम्तिने निश्चित छ । यस्तो अवस्थामा पर्खालमा गरिने खेती पद्धतिको विकासलाई खाद्य संकट टार्ने एउटा प्रयासका रुपमा हेरिएको छ । (एजेन्सी)